यस कारण गरियो मगर संघ बिघटन !( प्रेश बिज्ञप्ती सहित )
जातिय संघसंस्थाको भूमिका "डमी " शो मात्र ।
पहिचान र अधिकारका निम्ति गठित जातीय संस्थाहरू, आफ्नो पहिचान र अधिकार प्राप्ती भूमिकामा दिशाहिन अर्थात मृततुल्य देखिनु मात्रै होइन,झन् पछिल्लो कालखण्डमा सम्पूर्ण जातिय संस्था केवल नृत्यनाटक क्लबले जस्तै नाच-गान देखाउने “डमी” शो पिसको रूपमा मात्र सीमित हुनपुग्नु जातीय संस्थाहरुको औचित्य समाप्त भएको स्पष्ट देखिन्छ । -शुशी पुलामी मगर,अध्यक्ष नेपाल मगर संघ यु ए ई ।
०१ जनवरी , निरंकुश पन्चायती व्यवस्थादेखि नै,समाज सुधारका विभिन्न बहानामा, आफ्नो जातिको,पहिचान र अधिकार सुनिश्चितताको निम्ति विभिन्न रुपमा देखिएका जातिय संघ संस्थाहरु, देश बहुदलीय व्यवस्थामा प्रवेशको ०४६/४७ को छणमा अस्तित्वमा देखिए। मुलुकमा ०६२/६३ मा गणतन्त्र आउँदा र तत्पश्चात प्रथम सम्विधान विघटन नहुदासम्म जातिय संघ संस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो।
कतिथ दोश्रो संबिधान निर्वाचन र नश्लिल राज्य-सत्ताको षडयन्त्रमा जारी भएको नश्लिय सम्विधान २०७२ मा, आफ्नो पहिचान र अधिकार प्राप्तगर्न निर्माण भएका जातिय संघ-संस्था प्राय:मृत अवस्थामा देखिए। अर्थात कुनैपनी भूमिका विहिन् रहे।
पहिचान र अधिकारका निम्ति गठित जातीय संस्थाहरू, आफ्नो पहिचान र अधिकार प्राप्ती भूमिकामा दिशाहिन अर्थात मृत्‍युतुल्य देखिनु मात्रै होइन,झन् पछिल्लो कालखण्डमा सम्पूर्ण जातिय संस्था केवल नृत्यनाटक देखाउन खोलिएको क्लबले जस्तै नाच-गान देखाउने “डमी” शो पिस को रूपमा मात्र सीमित हुनपुग्नु जातीय संस्थाहरुको औचित्य समाप्त भएको स्पष्ट देखिन्छ। भने अर्को तर्फ खस-आर्य भएपनि,आदिवासी जनजातिका ऐतिहासिक पहिचान,देशका सम्पती हुन्,यसको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नु देशभक्त प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो,भन्ने बुझेर सामाजिकन्याय र राष्ट्रियताको लडाई लड्ने भवानी वराल,विश्लेषक सिके लाल,दिपेन्द्र झा,खगेन्द्र संग्रौला,डा.सुन्दरमणि दिक्षित र युग पाठक आदी बिद्वान र उहाँहरु जस्तै गैर जनजाति न्यायप्रेमी साथिहरुलाई पहिचान र अधिकारप्राप्तिको आन्दोलनहरूमा साथमा लिएर जान तथा उहाँ हरूको भूमिकाको समुचित सम्मान गर्न जनजातिका जातिय संघ संस्थाहरुमा उहाँहरु पहिचानवादी भएपनी गैर जनजाति हरुलाई आफ्नो जातिय संघ-संस्थाहरुको बैठक-सभा हरुमा सरिक गराउन प्राविधिक समस्या परेकोले,न्याय, समानता र सह-अस्तित्वमा विश्वास गर्ने खस-आर्य,मधिसे,मुस्लिम र शिल्पिहरु मिलेर पहिचान र अधिकारको निम्ति हुने आन्दोलनमा आधिवेरी नल्याएसम्म चट्टान जस्तै जमेर बसेको नश्लिल शासक र र्तिनिहरुका पिछलग्गु झोले जनजातिहरु गल्ने अवस्था देखिदैन।
यस्तो विषम अवस्थामा नेपाली उखान"....टाउको दुखेको दवाई नाइटोमा लगाई" गरेर विभिन्न बहानामा नृत्य ,नाटक गर्नको निम्ति मात्र जातिय संस्थाको व्यानर देखाई रहनु,आफ्नै जातिको निम्ति धोका एवं ठगी हो भन्ने हाम्रो समाजको ठम्याई रहेको हुँदा, संघकि अध्यक्ष शुशी पुलामि मगरको अध्यक्षता र प्रमुख सम्रक्षक यम राना मगरको आतिथ्यतामा युएईको आबुधाबी एअरपोर्टरोड पेप्सिकलामा बसेको संघको ११ औं बैठकले,आजको मिति २८ डिसेम्बर २०१७ वाट नेपाल मगर संघ,युएईको कुनै अस्तित्व नरहनेगरी,विघट गरिएको छ।
साथै संसारभर रहेका विभिन्न नामका नेपाली जातिय संघ संस्था विघटन गर्न एवं समय सापेक्ष तर्क र वष्तुवादी निर्णय गर्न, सरोकारवाला सम्पूर्ण जातिय संघ संस्था एवं सथिहरुमा आव्हान गर्दै,सवै राजनैतिक दलमा आस्था र विश्वास राख्ने,खस-आर्य,आदिवासी जनजाति, मुश्लिम , मधिसे र शिल्पी समुदायका पहिचान र समाजिक-न्यायमा विश्वास गर्ने पहिचानवादी साथीहरुमा पहिचानवादी महासभा गठन गर्नुको निम्ति, आ-आफ्नो ठाउँबाट आवस्यक पहल कदमी लिनुहुन हार्दिक आव्हान गरिएको छ।
केहर सिंह श्रीस मगर शुशी पुलामी मगर
Last Updated on Tuesday, 09 January 2018 15:56
सम्पूर्ण जातीय संस्थाहरू विघटन गरी पहिचानवादी महासभा गठन गरौ !!– हरि बहादुर घर्तिमगर
पहिचानवादीहरुको दुईतिहाईभन्दा बढीको बहुमत (पहिलो संविधानसभामा ४१७ सभासदको हस्ताक्षर संकलन) भएकोले प्रथम संविधानसभाबाट पहिचानसहितको संविधान जारी हुने देखेर नश्लीय चिन्तनले ग्रस्त ब्राह्मणवादी शासकहरूद्वारा नियोजित तवरले संविधानसभालांई विघटन गराई पहिचानविहीन संविधान जारी गराउन दोस्रो संविधानसभाको जन्म गराए। आदिवासी जनजातिहरुको मुख्य समस्या पहिचान हो। पहिचान भनेको अस्तित्व हो। स्वाभिमान हो।
आफ्नै भूमिमा पहिचानविहिन भएर बाँच्नु भनेको वास्तवमा पशु र दासको जीवन जिउनु हो। पेटभरी खानु, मल त्याग गर्नु र सन्तान उत्पादन गर्नुलाई मात्र मानवीय जीवन भनिंदैन। त्यो त फगत पाश्विक जीवन हो। शारीरिक रुपले मानव रुप देखिएपनि पशुलेभन्दा फरक गर्ननसक्ने वास्तवमा पशु सरह हो। जैविक (Biological) मात्र हो। मानव भएरै बाँच्नको लागि त मानवले गर्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई चाहेको यही मानव जीवन हो। मानवलाई पहिचान चाहिन्छ। स्वाभिमान चाहिन्छ। अनि सामाजिक न्याय चाहिन्छ। जातीय समस्या निराकरणको लागि नै जातीय संगठन निर्माण गरिएका हुन्छन्।
आदिवासी जनजातिहरूमा प्रमुख समस्या भनेकै पहिचान र राज्यको सबै तहमा आफ्नो पहिचानको सम्मानजनक उपस्तिथि हो। जन-जातीय भाषा, धर्म र संस्कृतिहरूलाई राज्यस्तरमा मान्यता दिलाउनु हो। पहिचानको मागको सार अर्थ नै यही हो। मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछिको प्रारम्भिक दिनहरुमा जातीय संस्थाहरुले अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको निम्ति केही जागारण ल्याए। फलस्वरुप पहिचानका आन्दोलनहरू भए। तर ठूला भनिएका दलका आर्य-पृष्ठभूमिका संकीर्ण जातिवादी नेताहरूका प्रभाव र दवावले आन्दोलन निस्कर्षविहिन अवस्थामा टुंगियो। तत्पश्चात् जातीय संस्थाहरु पुस माघको जाडोमा झैं कठ्याङ्ग्रिए।
फलस्वरुप पहिचानको निम्ति राज्यलाई दबाब दिन र उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न आदिवासी जनजातीय नेतृत्त्वहरू असफल सावित हुँदै गए। विगत केही समयदेखि देशभित्र र बाहिर आदिवासीहरुका बिभिन्न जातीय संस्थाहरु अस्तित्वमा आए। ती संस्थाहरूका उद्देश्य राज्यको मूलधारमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्नु, जातीय हक-अधिकारको बारेमा समुदायभित्र सचेतना फैलाउनु, जागरण ल्याउनु थियो। जसरी बाबु-आमाको पहिचानको आधारमा छोराछोरीको पहिचान रहन्छ। कुनै मानव समुदायको भाषा, धर्म, संस्कृतिको राज्यस्तरमा हुने पहिचानको आधारमा मात्र उसको अस्तित्व रहन्छ। तर तिनीहरू जातीय मुद्दाहरू उठाउनुको सट्टा व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक अवसर, आय-आर्जनको लागि बार्गेनिङ गर्ने माध्यमको रुपमा मात्र परिणत भए।
लोसार, उधौली-उभौली, माघी, धान नाच, माघे-सक्रान्ती पर्व मनाउन र नाचगान गर्नको निम्ति मात्र यी जातिय संस्थाको कायम राखिराख्नु औचित्यपूर्ण रहदैन। किनभने खस-आर्य जातिहरुले आफ्ना संस्कृतिहरू दशै, तिहार, तिज, शिवरात्री, बाला चतुर्दशी, कुशे औंशी आदिलाई मनाउन खस-आर्य जातिहरुलाई कुनै किसिमको जातिय-संस्था निर्माण गर्न आवस्यक परेको छैन। मधेसमा चलेको ६ महिनाभन्दा लामो आन्दोलन, लिम्बुवानमा चलेको वर्षौदेखिको आन्दोलन र थारुहट भूभागमा भएको चर्चित आन्दोलनहरु रुपमा भिन्नता देखिएपनि सारमा सवै पहिचान र अस्तित्वका लागि गरिएका आन्दोलनहरू थिए। पहिचानको लडाई कुनै निश्चित जातिको पक्ष र विपक्षमा नभई न्याय र सहअस्तित्वको लडाई हो। विविधतालाई संबोधन गर्दै पारस्परिक सदभाव, राष्ट्रिय एकतालाई मजबूत बनाउने प्रक्रिया हो। राष्ट्रवादको यही मूल उद्देश्यपूर्तिको लागि आदिवासी जनजातिको पहिचानप्राप्ति अभियानमा न्याय र समानतामा विश्वास गर्ने खस-आर्य, मधेसी, मुस्लिम र शिल्पि समुदाय आदि सबैको सहयोग र समर्थन आवश्यक छ। अन्यथा आदिबासी जनजातिको राष्ट्रिय एकताको उद्देश्यपूर्तिको अपेक्षा राख्नु भनेको एकजना नश्लवादी नेताले “गोरु गाडा चढेर अमेरिका जानू ।” भनेजस्तै हुनेछ।
कुनै निश्चित जाति न्यायप्रेमी, अर्को अन्यायी हुन्छ भन्नु गलत हुन्छ। अर्थात आदिवासीको पहिचान र न्यायको लडाईमा स्वयं जनजाति नै बिरोधि छन् भने, अर्कोतिर खस-आर्य भएपनि जनजातिहरूका राष्ट्रिय पहिचान संकटमा छन्,जनजातिका राष्ट्रिय पहिचान पनि देशको सम्पती हो,यसको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नु देशभक्त प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो, भन्ने बुझेर न्याय र राष्ट्रियताको लडाई लड्ने भवानी वराल, खगेन्द्र संग्रौला र युग पाठक आदि बिद्वानहरू उदाहरणको रुपमा छन्। उहाँहरुलाई पहिचान र अधिकारप्राप्तिको आन्दोलनहरूमा साथमा लिएर जान तथा उहाँ हरूको भूमिकाको समुचित सम्मान गर्न जनजाति संघ संस्थाहरुमा पहिचानवादी भएपनी गैर जनजाति हरुलाई आफ्नो जातिय संघ-संस्थाहरुको बैठक-सभा हरुमा सरिक गराउन प्राविधिक समस्या परेकोले, एकप्रकारले अन्योलको अवस्था सृजना भएको तितो यथार्थ छ। पहिचान र अधिकारका निम्ति गठित जातीय संस्थाहरू केवल नाच-गान देखाउने “डमी” शो पिस को रूपमा सीमित हुनपुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । बिभिन्न कालखण्डमा गठित यिनै पुराना सोचका “डमि”रूपी जातीय संस्थाहरुको औचित्य समाप्त भइक्यो।
यसैले अब न्याय, समानता र सहअस्तित्वमा विश्वास गर्ने खस-आर्य,मधिसे,मुस्लिम र शिल्पिहरु मिलेर पहिचानवादी महासभा गठन गर्नुको विकल्प छैन। यसले पहिचानको आन्दोलनमा लागेका तमाम आदिवासी जनजाति अगुवाहरुलाई नश्लिलवादीहरुले लगाउने कथित “जातिवादी”को आरोपलाई पूर्णरूपमा खारेज गर्नेछ। भने स्पस्ट रूपमा पहिचानवादी र पहिचान विरोधी दुईकित्तामा देखिएको राजनैतिक दुई धुर्वले पनि आ-आफ्नो उचाई लिनेछन्। तब मात्र मुलुकमा पहिचान र सामाजिक न्यायको अधिकार सुनिश्चित हुनेछ। सहअस्तित्व र पारस्परिक सदभाव सुमधुर बन्नेछ । राष्ट्रिय एकता मजबूत हुनेछ । राष्ट्रलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्याउन मार्ग प्रशस्त हुनेछ । नेपाल नेपालीको भाग्य र भविष्यको राजमार्गहरू खुल्नेछन् ।
Last Updated on Tuesday, 28 November 2017 12:47
बाहुनले आदिबासी जनजातिलाई उहिलै देखि दबाए पनि उनिहरु कहिलै दबिएनन् !
यम बहादुर बुढाथोकी मगर
१.नेपालको ईतिहासमा आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिमहरुलाई दमन शोषण गरी एउटै समुदायबाट पालोपालो गरी नेपालको राज्यसत्ता संचालन गरी आएका छन् । सत्ताधारीको यस्ता दमनका विरुद्वमा हाम्रा अग्रजहरुले विद्रोह पनि गर्दै आई रहनु भएको थियो । उदाहरणको लागि सन १७०२ मा तामाङ्ग मुर्मीहरुले गरेको खनियावास विद्रोह, सन १८०८ को चर्चित खम्बुवान हतुवाका अटलसीङ्ग खम्बुको नेतृत्वमा भएको विद्रोह, जसमा दुईजना ज्यानको भागी भए अन्य १५ जनाको सर्वस्व हरण भयो । १८७० मा जङ्ग बहादुर राणाको विरुद्व शाहसीक विद्रोह (आवाज उठाउने) गर्ने कया, लखन थापा मगरलाई जङ्गेले मृत्यु दण्ड दियो । आदिवासी जनजाति आन्दोलनको दवावमा अहिले नेपाल सरकारले क्या लखन थापालाई प्रथम सहिद भनि घोषणा गर्न बाध्य भएको छ । सन १८७० मा सुपति गुरुङ्ग र सुकदेव गुरुङ्गले राणाशाषकका विरुद्व उठाएका आवाजहरु पनि स्मरणीय छन् ।
२.राजनितिक रुपमै उठान भएका आन्दोलनहरुमा पनि वि.सं. १९९७ साल देखि नै आदिवासी जनजाती समुदायको फ्रन्ट लाइनमा निर्णायक भूमिका रह्यो । चाहे वि.सं. १९९७ सालमा सहादत प्राप्त गर्ने सहिदहरु हुन् वा जनमुक्ति सेनाका नेतृत्व गर्ने नारदमुनि थुलुङ्ग, रामप्रसाद राई, ज्ञान बहादुर याकथुब्बा (जी.वी याकथुम्बा), होविर आले मगर आदि हुन् । उनीहरु आदिवासी जनजातिहरु हुन् । वि.सं. २०४६ सालको आन्दोलनमा पनि आदिवासी जनजातिहरुको अग्रणी भूमिका रह्यो र उनीहरु संविधानमा धर्म निरपेक्ष लेखिनु पर्दछ भनी जोडदार माग सहित आन्दोलन गरेका थिए । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन तथा माओवादी शसस्त्र विद्रोहमा पनि आदिवासी जनजातिहरुको भूमिका उल्लेख्य थियो ।
३.पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात आदिवासी जनजाती अगुवा नेताहरुले धर्म निरपेक्ष, पहिचान सहितको संघीयता जातीय जनसंख्याको आधारमा सामानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ भनी आवाज उठाए । तर यहाँका बाहुनवादी शाषकहरुले नाटकीय ढंग बाटै संविधान सभा विघटन गरे ।
४.दोस्रो संविधानसभा पश्चात आदिवासी जनजाति संघसंस्था एकताबद्व भएर दबाब मूलक कार्यक्रम शक्तत तरिकाले गर्न सकेनन् । कार्यक्रम गरियो भन्ने मात्रको रह्यो । आदिवासी जनजाती बुद्धिजीवीहरुले लेख रचना, अन्तरक्रिया, गोष्ठी गरी ज्ञापन पत्र मात्र बुझाउने कार्यहरु गरे । तर सत्ताधारीहरुले उनीहरुको आवाज र भनाईलाई एउटा कानबाट सुन्ने र अर्को कानले उडाउने कार्य बाहेक केही गरेन ।
५.अहिले आदिवासी जनजाति आन्दोलन सशक्त हुन नसकेको तथ्य सबैको सामु छ । यसका प्रमुख दुई कारणहरु छन् । पहिलो यहाँका शाषकहरुले आदिवासी जनजाति एकताको आवाज टुक्रयाउने र हस्तक्षेप गर्ने कार्य पछिल्लो वर्ष चरम रुपमा देखा पर्यो । जातीय संगठनहरुमा राजनितिक हस्तक्षेप बढ्दै गयो । आदिवासी जनजाति राजनितिक अगुवाहरु माथी पार्टीको नियन्त्रण चर्को हुदै गयो । मुलधार मिडियाले आदिवासी जनजातिका विरुद्व नकरात्मक प्रचार प्रसार गर्यो । दोस्रो कारण आदीवासी जनजाति नेतृत्वमा दुई डुङ्गामा पाईला टेक्ने प्रकृति बढ्न गयो । मध्यम वर्गीय आदिवासी जनजातिले केही पाएको अनुभव गर्न थाले र आन्दोलन उनिहरुको लागि अरुले नै गरी दिनु पर्ने विषय भयो । लोभको राजनितिका कारण आफ्नो व्यक्तिगत राजनितिक भविष्यको अन्त्य हुने डरले आदिवासी जनजाति राजनितिक अगुवाहरुको मनमा विचलनको घर पनि बस्न थाल्यो ।
६.यति मात्र कहाँ हो र ! पछिल्ला वर्षहरुमा चार किसिमका विरोधी दुष्प्रचार र कुतर्कहरु बाट जनजाति आन्दोलनलाई ओझेल पार्न खोजिएको छ । पहिलो तर्क हो यो आन्दोलनले देशलाई विखण्ड गर्ने खालको छ । दोस्रो हो, यो आन्दोलनले जातीय दन्द निम्त्याउछ । तेश्रो हो, जनजातीले उठाएको जातीय समनताको सवाल विदेशी एजेण्डा हो । चौथो हो नेपाल मा आदिवासी जनजातीहरुको समस्या नै छैन । यी दुष्प्रचार तर्क संगत छैनन । कारण यसले आदिवासी जनजाति माथी परेको भाषिक, राजैनितिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विशेष किसिमको उत्पिडन र यसले पारेका असरलाई नजर अन्दाज गरेर एकल जातीय राज्यको निरन्तरता दिन सत्ताधारी जुन पृथ्वी नारायण शाह देखि हाल सम्म यथावत कायमै छ ।
७.नेपालको नयाँ संविधान २०७२ आदिवासी नजजातिको हकअधिकार विरुद्व भएतापनि यसले समग्रमा केही महत्वपूर्ण कुराहरु स्थापित गरेको छ । तर पनि यो संविधान जातीय छ, विभेद जन्य छ । सामानुपातिक लोकतन्त्रको लागि यसलाई परिवर्तन गर्नैपर्छ । यो संविधानमा संवोधन भएका केही विषयहरु आदिवासी जनजातिहरुको दिमाग (मगज) बाट उत्पादित विषयहरु हुन् । २०४८ सालमा निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्दाको जनमुक्ति मोर्चाको घोषणा पत्र हेर्यौ भने छर्लङ्ग हुन्छ । नयाँ संविधानमा संबोधन भएका पहिलो गणतन्त्रको स्थापना हो । दोस्रो संघीयता हो । आदिवासी जनजातिहरुले चाहे जस्तो सिमांकन र नामाङ्कन नभएता पनि खिचडी संघीयता संविधानमा लेखियो । तेस्रो हो धर्म निरपेक्षता, र चौथो हो समावेशिता । यी कुराहरु गोलमोटल तरीकाले संविधानमा लेखियता पनि समावेशीताको अवधारणाको रुपमा स्थापित भएको छ । जातीय जन संख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधि हुनुपर्छ भनी वकालत गर्नको लागि सहज स्थिति बनेको छ ।
८.आदिवासी जनजाति आन्दोलन कहिले शसक्त र कहिले शित्तल हुदै गएको छ । जातीय संघ संस्थाद्वारा गरेका आन्दोलनको उपलब्धी आंशिक रुपमा केही उपलब्धी भएता पनि जुन रुपमा हुनु पर्ने हो, त्यो रुपमा हुन सकेको छैन, यो यथार्थ हो, किन ? संविधान सभामा खाँटी जनजातिहरुको उपस्थिति कमजोर रहेकाले । जनजातिहरु सभासद त भए, ठोस आदिवासी जनजाति, दलित र उत्पीडितहरुको साँचो पर्यो उठाउन चाहेतापनि उनीहरुले त्यसो गर्न सकेनन् । कारण उनीहरुले जसको नुन पानी खायो उसको सोझो चिताउनै पर्यो । त्यो उनीहरुको कमजोरी पनि होइन । कमजोरी त संविधान सभाको निर्वाचन भन्दा पहिला Vertical / Horizontal लाईनबाट अथवा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आदिवासी जनजातीहरुको संविधान सभामा उल्लेखनीय उपस्थिति रहन्छ भनी आँकल (Estimate) गर्दा भयो । जातीय जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनी वकालत गर्नेहरुका कुरा सुनिएन र ? के यो न्याउरी मारेर पछुतो भएको होइन र ?
९.आदिवासी जनजाति अगुवाहरुले अब कसरी अघि बढ्ने भनी सोच्ने बेला आएको छ । विगतका गल्तीहरुबाट सबक (lesson) सिक्दै कार्यक्रम तय गर्नु पर्दछ । सामाजिक संघसंस्था बाट मुद्वा उठाए पनि अन्तमा समाधान वा निर्णय गर्ने भनेको त राजनितिक पार्टी नै रहेछ । होइन र ?
१०.लिम्बुवानमा अन्दाजी ३३% लिम्बु बसोबास गर्दछन् तर लिम्बुवानका लिम्बुहरु तिनतिर मुख फर्काएर लिम्वुवान प्राप्त गर्न सकिन्छ ? त्यस्तै मगरातमा ३४% मगरहरु बसोबास गर्छन् । तर उनीहरु पनि चारतिर मुख फर्काएर बसेका छन्, के चारतिर मुख बनाएर मगरात प्राप्त गर्न सकिन्छ ? अहँ सकिदैन । त्यसो भए के गर्ने त ? समाधानको बाटो के हो ? तिनतिर होइन, चार तिर होइन सबैले एकैतिर मुख बनाउनु पर्छ । के मा कता मुख फर्काउने ? यसको मतलब हो राजनितिक पार्टीमा हामी एउटै पार्टीमा एकबद्धता हुनै पर्दछ । यदी जातीय मुक्ति अथवा जातीय समानता प्राप्त गर्ने हो भने, अन्यथा किन सुकिस टिमुर ? आफ्नै रागले भन्ने उखान चरितार्थ हुन असम्भव कहाँ छ र ? हामी एक भएर बसेनौ भने आदिवासी जनजातिको अवस्था अहिले भन्दा अझ तल झर्नेछ । आफ्नै देशमा राजनितिक भिकारी हुनु पर्ने अवस्था आउनेछ ।
११.आदिवासी जनजातिका, अगुवा नेताहरु समक्ष राजनितिक अस्तित्वको विषयमा कुरा गरौं । आउदो निर्वाचनमा भाग लिने भनी ९५ पार्टीहरुले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका छन् । यी मध्ये विगतका निर्वाचनबाट स्थापित पार्टी नेपाली कांग्रेस, ने.क.पा.एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिप्रजातन्त्र पार्टी, तराईका मधेसीवादी पार्टीहरु हुन् । यि पार्टीहरुको नेतृत्व खस÷आर्य र तराई वासी समुदायले गरेका छन् । खै ? हिमाली÷पहाडे आदिवासी जनजाति दलितले नेतृत्व गरेको पार्टी माथिल्लो ५ मा आउन सकेको ? पार्टी गठन गर्ने नेता हुने मात्र हो र ? होइन राष्ट्रिय स्तरमा पार्टी स्थापित हुनुपर्दछ र गराउनुपर्दछ । यहाँ भन्न खोजिएको के हो भने अब हुने निर्वाचन पछि राष्ट्रिय पार्टी हुन को लागि खसेको मत को ३% मत ल्याउन बाध्य पारीएको छ, भने प्रत्यक्ष तर्फ १ सिट ल्याउनै पर्छ । हिमाली/पहाडे आदिवासी जनजाति र दलित समुदायले नेतृत्व गरेको पार्टी आउदो निर्वाचनबाट राष्ट्रिय पार्टी हुन सकेन भने तपाई हामी आदीवासी जनजाती, दलित अगुवा नेताहरुको अस्तित्व माथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्न र ? अवश्य हुन्छ ।
१२.तसर्थ हिमाली/पहाडी आदिवासी जनजाति र दलित समुदायबाट नेतृत्व गरेको र निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका पार्टीहरु मध्येबाट राष्ट्रव्यापी संगठन विस्तार भएको, राष्ट्रिय एजेण्डा भएको पार्टीलाई छनोट गरौं, सहयोग गरौं । र आउदो निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टी बनाऔं । कम्तीमा पनि एउटा पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउन सकियो भने सदनमा आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम र पिछडिएका वर्गका मुद्वा वहस गराउन सकिन्छ । सडक आन्दोलन गरी दबाब मुलक कार्य गरी सत्ताधारीलाई सदन र सत्ताबाट दवाव दिन सकिन्छ र नेपालको संविधान २०७२ आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम उत्पिडित वर्गको आधारभुत आवश्यकताअनुसार संसोधन गराई आदिवासी जनजाती, दलित, मुस्लिम, उत्पिडितहरुलाई समानताको आधारमा अधिकार दिलाउन सकिन्छ । ज्ञापन पत्र बुझाउने, मैले यसो गरें, उसो गरें भनी भाषण ठोक्ने कामले मात्र केही हुदैन । यो देशको राजतन्त्रको बागडोर आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम र उत्पिडितहरुले नसमाल्ने हो भने यो देशको विकास हुन सक्दैन । आदिवासी जनजाति राज्यसत्ता सम्हाल्न सक्षम छन् भन्ने उदाहरण आदिवासी जनजातिका कतिपय नेता तथा बुद्विजीवीहरुले दिइसकेका छन् । उदाहरणका लागि डा. हर्क गुरुङ्ग र कुलमान घिसिङ्गलाई पनि लिन सकिन्छ । तसर्थ हिमाली/पहाडे आदिवासी जनजाति दलित, मुस्लीमको बाहुल्यता भएको पार्टी राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्न आवश्यक छ ।
१३.विदेशमा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत आदिवासी जनजातिहरुले संघ संस्था स्थापना गरेका छन् । आफ्ना संस्कृति संस्कारको संरक्षण गरेका छन् । साथै राजनितिक आश्थाको आधारमा संस्था स्थापना भएका पार्टीहरुमा पनि आबद्ध छन् । आदीवासी जनजातीका अगुवा नेताहरुले चन्दा संकलन गरी सामाजिक संस्था र राजनितिक पार्टीहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएका पनि छन् । उपलब्धी के भयो ? समिक्षा गर्नु होस् र भविष्यमा कसलाई सहयोग गर्ने भनी व्यापक छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुहोस् ।
१४.मानिस जुन समुदायमा जन्मन्छ सर्वप्रथम त्यही समुदायको हुन्छ । जस्तै मगर, गुरुङ्ग, राई, लिम्बु आदि । नेपालमा राजनितिक आस्थाको आधारमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र जनमुक्ति हुने प्रचलन पनि छ । तर जे सुकै भएता पनि अन्तमा मर्दा–पर्दा सर्वप्रथम जुन समुदायमा जन्मेको थियो, त्यही समुदाय नै चाहिदो रहेछ, भन्ने तथ्य कुरा आदिवासी जनजातीले बुझ्नु पर्दछ ।
१. डा. ओम गुरुङ्ग – नेपालमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनको इतिहास ।
२. डा. मुक्तसिहं तामाङ्ग – आदिवासी जनजातीहरु अधिकारको लोकतान्त्रिक संघर्ष– प्राप्ती र चुनौतीहरु ।
३. मल्ल के सुन्दर–महासंघको ऐतिहासिक विकासक्रम– पहिलो खण्ड ।
४. राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी– घोषणा पत्र २०४८ ।
लेखक: आदिबासी जनजाति जनआन्दोलनका अभियान्त तथा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका बरिष्ट उपाध्यक्ष हुन् ।
Last Updated on Tuesday, 07 November 2017 14:05
Last Updated on Tuesday, 07 November 2017 13:39
कार्तिक १५ - प्रदेश र संघको निर्बाचनको संघारमा दुई ठूला पार्टीहरु एमाले र काङ्ग्रेसले भिन्नाभिन्नै दुई महागठबन्धन बनाए । एमाले–माओवादी गठबन्धनको नाम बाम गठबन्धन र काङ्ग्रेस–राप्रपा गठबन्धन लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नामले चिनिएको छ । बाम गठबन्धनले दुई तिहाई ल्याएर स्थीर सरकार बनाउने र नेपालमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने झ्याली पिट्न थालेपछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनले लोकतन्त्रमाथि खतरा बढेको र साम्यवादी एकदलीय कम्युनिष्ट शासन लादिने त्रासको राजनीतिक ब्यापार सुरु गर्यो । सम्भवतः निर्बाचनमा यी दुई ठूला गठबन्धनले यसैलाई चुनावी नारा बनाएर जनतामा जाने देखिन्छ । सारमा यो दुवै गठबन्धन न समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्नको लागि हो, न लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता स्थापित गर्नको लागि नै हो । यो फगत जनताको समाज विकासको नियमलाई बुझ्न नसक्ने अनविज्ञताको फाइदा उठाएर गरिने प्रचार सामाग्री मात्र हुन् । यो मुद्धाको हिसावले उत्पीडित जनतालाई अधिकार दिन बनेको गठबन्धन होइन । यो अवसरवादी र दक्षिणपन्थीहरु बीच सत्तामा टिकिरहन गरिएको गठबन्धन हो । बाम गठबन्धनको गणितबाट तर्सिएको काङ्ग्रेसले स्थानीय निर्बाचनमा बढारिएको राप्रपालाई जोडेर लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनायो । यो उसको रहर नभएर बाध्यता थियो । यी दुवै गठबन्धनले नश्लीय सत्तालाई अझ बलियो बनाउने देखिन्छ । स्थानीय तहको निर्बाचन परिणामबाट आफ्नो सीट सुरक्षित नदेखेका प्रचण्ड र काङ्ग्रेस–माओवादी मिलेर ५ बर्ष खाए आफू सकिने ओली बुझाइको मेलबाट बनेको यो तालमेल हो ।
अर्कोतर्फ बाम गठबन्धनले जुन समाजवादी क्रान्तिको सपना बेच्ने कोशिस गरिरहेका छन् । यस्तो सय बर्षपछि बिक्रि हुने सामानको ब्यापार अहिले गर्नु हुँदैन । विगतको सामन्ती कालखण्डमा जन्मिएको काङ्ग्रेस, कम्युनिष्ट जस्ता पार्टीहरु सबैले आर्थिक नीतिलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर पार्टी बनाए । समय अनुसार त्यो ठीक थियो । अब सामन्तवादको मूल जरा उखेलिएको र मुलुक पुँजिवादी राज्य ब्यवस्थातर्फ अघि बढिरहेको स्थितिमा नेपाली जनताको मूल मुद्दा अस्तित्व र विकाससँग जोडिएर आएको छ । विश्व दुनियाँ पहिचान, स्वतन्त्रता र समानताको पक्षमा छन् । नेपालका विविध जात÷जाति, बर्ग र समुदाय पनि यही पक्षमा उभिएको छ । यसलाई दुवै गठबन्धनले आफ्नो भावी नीति, कार्यक्रममा समेट्नु जरुरी छ । अन्यथा, भ्रमको खेतीले भोट लुट्न सकिएला, देश बनाउन सकिदैन ।
लेखक: नेपाल तामाङ घेदुङका अध्यक्ष हुन् ।
Last Updated on Wednesday, 01 November 2017 14:42
पहिचान पक्षधरहरुको चासो र चिन्ता-उपमहासचिब अस्लामी
के पि ओली बाहुन ,पुष्पकमल दाहाल बाहुन र बाबुराम भट्टराइ बाहुनको बाम एकता कि बृहद ब्राह्मण एकता सम्मेलन ?
राजा मानसिङ खड्कामगर र दशैको टिकाको रहस्य ।
दसैं यस् कारण हिन्दू चाड